Nhau - Iyo yazvino in vitro yekuongorora indasitiri inoshandisa mune yekukurumidza kukurumidza
Novel coronavirus pneumonia novel coronavirus pneumonia ndiyo inonyanya kukosha pakati pekutanga. Iyo inoverengeka coronavirus pneumonia (IVD) indasitiri inokura nekukurumidza nekukurumidza kukurumidza kweakasiyana matekinoroji matsva uye iyo catalysis yeiyo nyowani korona pneumonia. Inotarisirwa kuve imwe yemisika inoshanda uye ichikurumidza kusimukira muindasitiri yezvokurapa mune ramangwana.
Tekinoroji nyowani, maitiro matsva uye kudiwa nyowani kuvhura nzvimbo nyowani
Nekukurumidza kukurumidza kweiyo biotechnology, musika chikero chepasi rose in vitro diagnostic indasitiri iri kukura nekukurumidza. Sekureva kwedata reChina in vitro diagnostic network (caivd), muna 2013, saizi yemusika wepasi rose in vitro diagnostic indasitiri yaive madhora US $ 60 bhiriyoni, uye yakapfuura US $ 80 bhiriyoni mu2019, iine avhareji yemakomponi yekukura kwegore ye6%. Zvinotarisirwa kuti saizi yemusika ichapfuura US $ 90 bhiriyoni muna 2020 (ona Mufananidzo 1 we
Zvinoenderana nematanho ekutsvaga uye nzira, inogona kuganhurwa mumatanho makuru matanhatu: immunodiagnosis, kuongororwa kwemakemikari, kuongororwa kweropa, kuongororwa kwemamorekuru, hutachiona hwehutachiona uye kuongororwa kwechimbichimbi (POCT). Kubva pane yekuvandudza maitiro epasi rose in vitro diagnostic musika, mumakore achangopfuura, chikamu chemusika chekiriniki biochemical kuongororwa uye zvigadzirwa zvemununodiagnosis zvakadzikira zvishoma, nepo chikamu chemusika cheiyo nucleic acid chitupa, microbiology, histology uye kuyerera cytometry kwakawedzera gore negore, iine avhareji yemubatanidzwa wegore rekukura mwero weinopfuura gumi%. Mu2019, immunodiagnosis ine chikamu chikuru kwazvo pamusika, kuverenga 23%, kuchiteverwa neacochemical diagnostic, kuverenga 17% (ona Mufananidzo 2 kuti uwane ruzivo).
Mumakore achangopfuura, matekinoroji matsva uye mamodheru epasirese vitro yekuongorora indasitiri anga achibuda. Molecular diagnostic tekinoroji inomiririrwa nezvizvarwa zviviri geni zvinoteedzana (NGS), chaiyo-nguva yekutsvaga zvigadzirwa zvinomiririrwa ne microfluidic machipisi, uye matekinoroji matsva uye mamodheru senge mazuva ano manejimendi ezvehutano uye akarongeka ekurapwa, anomiririrwa nedata hombe uye neInternet pamwe. imba nyowani yeiyo in vitro yekuongorora indasitiri. Nekuenderera mberi kwekusimudzira kweiyo vitro yekuongorora tekinoroji uye nekushandisa kwakawanda kweanocheka-epakati sainzi uye tekinoroji, yepasirese in vitro yekuongorora musika inochengetedza kukura kwakasimba. Uye zvakare, hwaro hwepasi rose hwehuwandu huri kuwedzera, uye huwandu hwezviitiko zvezvirwere zvisingaperi, gomarara nezvimwe zvirwere zviri kuwedzera. Inokurudzirawo kuenderera mberi kwekuvandudza kweiyo vitro yekuongorora musika.
Inotungamirwa nekumhanyisa kwekukwegura kwevagari, hunyanzvi hwekugadzira tekinoroji uye chikamu chemitemo, iyo in vitro yekuongorora indasitiri muChina yanga ichiramba ichiramba ichienderera. Mumakore achangopfuura, iyo epamba in vitro yekuongorora indasitiri yakavandudza nekukurumidza, mamwe mabhizinesi emuno akaita budiriro muhunyanzvi, uye mamwe emabhizinesi emuno akasimuka nekukurumidza achityairwa neakakura emusika kudiwa. Uye zvakare, mumakore achangopfuura, China yakaburitsa zvakateerana marongero emitemo yekutsigira kuvandudzwa kweiyo in vitro diagnostiki indasitiri. Semuenzaniso, kune anoenderana anotsigira marongero mune yegumi neshanu makore chirongwa chekurapa chishandiso sainzi uye tekinoroji hunyanzvi, yegumi neshanu makore mashanu chirongwa chebiotechnology hunyanzvi uye hutano China 2030 kuronga kuronga, izvo zvinowedzera kukurudzira simba kweindasitiri.
Misika inosimuka ine mikana
Pakazara, kuvandudzwa kwepasi rose IVD musika haina kuenzana zvakanyanya. Kubva pakuona kwekuparadzirwa kwedunhu, North America, Western Europe nedzimwe nharaunda dzakasimukira zvine hupfumi dzinopfuura makumi matanhatu muzana yemugove wemusika; kubva pakuona kwemugove webhizimusi wemusika, ingangoita hafu yemugove wemusika unotorwa naRoche, Abbott, Siemens naDanaher. China musika uri kubuda wein vitro diagnostiki indasitiri, iri munguva yekukura nekukurumidza izvozvi uye inogona kutarisirwa mune ramangwana.
Parizvino, hupfumi hwakasimukira senge North America neWestern Europe account inopfuura 60% yepasi rose in vitro diagnostic musika. Nekudaro, nyika dzakasimukira uye misika yedunhu dzakapinda padanho rakakura rine budiriro yakagadzikana uye kukura kunonoka. Munyika dzichiri kusimukira, seindasitiri iri kusimukira, in vitro diagnostic ine hunhu hwediki diki uye mwero mukuru wekukura. Zvinotarisirwa kuti mumisika iri kubuda inomiririrwa neChina, India nedzimwe nyika nematunhu, huwandu hwekukura kwemusika wekuongorora hutachiona hunoramba huri pa15% ~ 20%. Musika urikubuda unozova imwe yenzvimbo dzingangoitika yein vitro yekuongorora indasitiri.
China in vitro yekuongorora indasitiri yakatanga mukunopera kwema1970 uye ikozvino iri munguva yekukurumidza kukura. Muna 2019, musika chikero cheChina mu in vitro kuongororwa indasitiri iri padyo ne90 bhiriyoni yuan, iine avhareji yegore mukomboni kukura kweanopfuura makumi maviri muzana. Mumakore gumi apfuura, anopfuura makumi maviri emuno in vitro diagnost Enterprises akabudirira kuwana IPO, uye Mindray zvokurapa, Antu zvipenyu, BGI uye Wanfu zvipenyu ave anotungamira mabhizinesi muzvikamu zvavo. Zvimwe zvinhu zvinoshandiswa zvakanyanya (senge biochemical diagnostic uye pakarepo kuongororwa) zvasvika padanho repasi rose panguva imwecheteyo. Zvakafanana nemusika wepasi rese, Roche, Abbott, Danaher, Siemens uye hysenmecon account inopfuura 55% yemusika weIVD weChina. Makambani emarudzi akawanda anoshandisa zvazvakanakira muzvigadzirwa, tekinoroji nemasevhisi kuenderera mberi nekuwedzera mari yavo muChina, kunyanya muzvipatara zvepamusha zvepamusoro pamwe nemimwe misika yepamusoro, uko mutengo wacho unowanzo kwira kupfuura iwo wezvigadzirwa zvakafanana zvemumba. Mune ino yegore ino novel coronavirus pneumonia kudzivirira uye kutonga, emuno ma-vitro ekuongorora mabhizinesi anoratidza maziso avo akajeka. Kambani yechitatu yekuyedza kambani yakavandudza mamiriro ayo muhurongwa hwekurapa, uye inotarisirwa kuti iite rimwe basa rekuongorora chirwere.
In vitro diagnostic reagents zvinhu zvinoraswa zvevatengi, uye kudiwa kwemusika wemasheya hakuzodzokere. Iyo yekumba in vitro yekuongorora musika iri kure nekusvika kune "siringi". Kuchine minda yakawanda isina kuvhurwa inofanirwa kuvandudzwa, uye indasitiri icharamba yakagadzikana uye ichikurumidza kusimudzira maitiro mune ramangwana.
Tarisiro yakanaka yezvikamu zvikuru zvitatu
Munguva yekupedzisira denda, China in vitro yekuongorora indasitiri inopinda munguva yekukura nesimba mumamorekuru kuongororwa, immunodiagnosis uye pakarepo kuongororwa.
Parizvino, kukura kwemusika wemakemikari ekuongorora indasitiri muChina kuri kukurumidza, iyo indasitiri yevasungwa yakaderera, musiyano wehunyanzvi pakati pemabhizimusi epamba nevekunze ishoma, uye bhizinesi rega rega rine munda waro wehunyanzvi.
Maererano nenhamba, muna 2019, musika chikero cheChina chemamorekuru ekuongorora indasitiri ingangoita mabhiriyoni 11.58 yuan; avhareji yegore remakomponi ekukura mwero kubva 2011 kusvika 2019 inosvika 27%, ingangoita kaviri kukura kwepasirese. Mumakemikari eChina ekuongorora mamakemikari, mabhizimusi ekunze-anobhadharirwa mari anosvika 30% yemusika, anonyanya kuverengerwa kumusoro kweiyo keteni yeindasitiri, nezvigadzirwa zveRoche, huwandu hweAbbott PCR uye sequencer yeL Lumina ndiye mumiriri; emabhizinesi emuno anoverengera 70% yemusika wechigadzirwa, uye bhizinesi ravo rinonyanya kutarisa PCR yekuongorora reagents uye ngs ekuongorora masevhisi. Iwo anomiririra mabhizinesi anosanganisira Kaipu biology, aide biology, Huada gene, berry gene, Zhijiang biology, Daan gene, nezvimwe.
Kune vazhinji vatori vechikamu mumamorekuru ekuongorora musika kuChina, uye iyo indasitiri yevasungwa yakaderera. Chikonzero chikuru cheichi chiitiko ndechekuti zvido zvekiriniki zvinobatanidzwa mukuongorora mamorekuru zvakawandisa uye zvakaomarara, uye mumwe nemumwe anotora chikamu mumusika ane hunyanzvi hwekuita uye nzvimbo dzehunyanzvi, saka zvinonetsa kuvhara zvizere mabhizinesi ese, saka zvinonetsa kuumba yemhando yepamusoro yemakwikwi.
Molecular diagnostic technology inonyanya kusanganisira PCR, hove, kuenzanisira kwemajini uye chip chip. Mukufamba kwenguva, iyo yekuvandudza nzvimbo yegene yekuteedzera tekinoroji yakafara, asi mutengo wayo wakakwira. PCR tekinoroji ichiri tekinoroji yepamusoro mumunda wekuongorora mamorekuru. Kuti uite basa rakanaka mukudzivirira denda uye kutonga, mazhinji emumba mamorekuru ekuongorora mabhizinesi akateedzana akagadzira nyowani coronavirus nucleic acid yekuona kits, uye mazhinji emakiti aya anoshandisa fluorescent huwandu hwePCR tekinoroji, inoita basa rakakosha mukudzivirira kwehosha uye kutonga, uye kutyaira iyo yese mamorekuru kuongororwa indasitiri kuti ive netariro yakanaka.
Parizvino, musika weiyo immunodiagnosis ndiyo hombe musika chikamu chein vitro chirwere indasitiri muChina, ichiverengera nezve 38% yeiyo yose in vitro diagnostiketi yemusika.
Kupfuura makumi matanhatu muzana yemugove wemusika we immunodiagnosis muChina inogarwa nevekunze-vanobhadharwa mabhizinesi, nepo chete 30% yemugove wemusika wemakambani emuno akadai seMindray medical, Mike biological, Antu biological, nezvimwe. kusungwa kwakakwirira. Vekunze vanobhadhara mari mabhizinesi anotora 80% ~ 90% yeiyo yepamusoro-magumo musika mugove we immunodiagnosis muChina neyakagadzirwa zvigadzirwa zvigadzirwa kwemakore mazhinji, uye vatengi vavo vanonyanya zvipatara zvepamusoro; emabhizinesi emuno anomhanyisa maitiro ekutsiva epamusha kuburikidza nezvakanaka zvemutengo mashandiro uye enzanirana reagents.
China chaiyo-nguva yekuongorora musika yakatanga kunonoka, uye huwandu hwesika musika hudiki. Nekudaro, mumakore achangopfuura, kukura kwemusika pamusika kwagara kuchichengetedza pa10% ~ 20%, yakakwira zvakanyanya kupfuura huwandu hwepasi rose hwekukura kwe6% ~ 7%. Maererano neiyo data, mu2018, China chaiyo-nguva yekuongorora musika inosvika 6.6 bhiriyoni yuan, inosvika ingangoita 7.7 bhiriyoni yuan muna 2019; Roche, Abbott, merier uye mamwe mabhizinesi ekune dzimwe nyika-anotora mari anozotora chinzvimbo chakakwirira muChina yepamusoro-yekupedzisira chaiyo-nguva yekuongorora musika, iine chikamu chemusika chingangoita 90%; emabhizinesi emuno ari kupfuurira zvishoma nezvishoma pane rakakombama nemitengo yavo yemitengo uye hunyanzvi hwekugadzira zvinhu.
Instant kuongororwa kunogona kukurumidza kuburitsa mhedzisiro, iyo isinga ganhurirwe nenzvimbo yekuyedza, asi zvakare inoda yakaderera hunyanzvi hunyanzvi hwevanoshanda. Iyo inokodzera huswa-midzi masisitendi ekurapa, pamwe nezvipatara zvikuru, senge emergency, outpatient, pre-operative chirwere chinotapukira chekuongorora, nosocomial hutachiona kuongorora, kupinda-kubuda panzvimbo-saiti, kupinda-kubuda kwevashandi kuzviongorora uye zvimwe zviitiko . Naizvozvo, zvirinyore, miniaturized uye inokodzera kukurumidza kuongororwa kweiyo chaiyo-nguva yekuongorora yekuyedza zvigadzirwa ichaita rakakosha basa mukuvandudza kwe vitro yekuongorora indasitiri mune ramangwana. Parizvino, mumiriri wechokwadi-nguva ekuongorora mabhizinesi muChina anosanganisira Wanfu biology, Jidan biology, Mingde biology, Ruilai biology, Dongfang gene, Aotai biology, nezvimwe.
Kubudikidza nekufungisisa kwakazara kwekukanganiswa kwedenda mamiriro uye tarisiro yekusimudzira musika, tinogona kuona kuti mushambadziro wekusimudzira maitiro uye Tarisiro yemamorekisheni ekuongorora, immune immune uye kuongororwa kwazvino kwakanaka. Nebasa rayo rakakosha mukudzivirira kwedenda nekudzora, in vitro diagnostia ichave yakanyanya kunetsekana uye kuzivikanwa nemusika, uye ichave imwe yenzvimbo dzingangodaro muindasitiri yezvigadzirwa zvemishonga mumakore mashoma anotevera.